सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी लक्षित प्राविधिक शिक्षामा सामुदायिककै विद्यार्थी वन्चित - शिक्षा | Kantipur TV HD
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी लक्षित प्राविधिक शिक्षामा सामुदायिककै विद्यार्थी वन्चित
गुल्मी शान्तिपुरकी सुस्मिता पुन बुटवलको नविन औद्योगिक कदरबहादुररीता माविमा कक्षा ९ मा सिभील इञ्जीनियरीड. पढिछन् । बुटवल गोलपार्कका रोशन सुवेदी पनि उनीसंगै सिभील इञ्जीनियरीड. पढ्छन् । तर उनीहरु सामुदायिक विद्यालयका उत्पादन होइनन् । कक्षा ८ सम्म नीजी विद्यालयमा पढेपछि मात्रै यहा आएका हुन् । बुटवलकै कालिका मानवज्ञान माविमा कम्प्युटर इञ्जीनियरको पढाइ हुन्छ । यहाँपनि अधिकांश विद्यार्थी तल्लो कक्षा नीजी विद्यालयमा पढेका छन् । पढेपछि रोजगार वा स्वरोजगार बनाउन भन्दै ६ वर्षअघिदेखि सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पढाउन थालिएको छ । यसअन्तरगत कक्षा ९ देखि १२ सम्म इन्जिनियरिङतर्फ सिभिल, इलेक्टि्रकल, कम्प्युटर, र कृषि तथा पशु विज्ञानतर्फ बाली विज्ञान र पशु विज्ञानका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । त्यसमा तल्लोतहदेखि नै सामुदायिकमा पढेका, मध्ययम खाले र विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई लक्षीत गरिएको छ । तर प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम कठिन र अग्रेजी माध्ययमको हुदा लक्षीत विद्यार्थी नै पढाइबाट वञ्चीत छन् । सुरुको वर्ष सामुदायिकका मात्रै पढाउदा पढ्न नसकेर १५ जना विद्यार्थी रोक्नुपर्यो । तयसपछि प्रवेश परीक्षा लिएर अन्तबाट ल्याउन लागेका हौं
कक्षf ९ र १० को प्राविधिक शिक्षामा ६० प्रतिशत प्रयोगात्मक र ४० प्रतिशत सैद्धान्तिक कक्षा हुन्छ । तर प्रयोगात्मक अभ्यास कसरी गराउने भन्ने छुट्टै पाठ्यक्रम छैन । कक्षा ११ मा विज्ञानको ५ सय बाहेक २ सय पूर्णाक प्रयोगात्मक छ । कक्षा १२ मा विज्ञानको ५ सय बाहेक २ सय प्रयोगात्मक र १ सय अंग्रेजी पढाइ हुन्छ । यसले विद्यार्थीहरुमाथि धेरै बोझ थपेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा संचालन भएका प्राविधिक शिक्षाका गुनासा बढेपछि अवस्था र चुनौतिबारे छलफल गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुझाव संकलन थालेको छ । त्यसमा अधिकांश प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकले पाठ्यक्रम र पाठ्यभार सुधार गरेमात्रै तल्लो तहमा सामुदायिक विद्यालय पढेकाले माथिल्लो कक्षामा प्राविधिक शिक्षा पढ्न सक्ने सुझाब दिएका छन् । कक्षा ९ र १० मा अंग्रेजी माध्ययमको पाठ्यक्रम छ । नेपाली चल्दैन । ११, १२ मा पुरै वित्रानको कोर्षबाहेक २ सय पूर्णाक यो पढ्नुपर्छ । त्यसैले पाठ्यक्रम नसुधारी सामुदायिकका उत्पादन वा तल्लो तहमा अंग्रेजी नपढेकालाई पढाउन सकिदैन । सानो कक्षादेखि नै सामुदायिकमा पढेका, विपन्न परिवार र मध्ययमखाले बालबालिकालाई पनि पढ्ने अवसर दिनेहो भने सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम, प्रयोगात्मक अभ्यास शैली र प्रवेश परीक्षाको तरिका फेर्नुपर्ने देखिएको छ ।